Weedhsan - Ceebaha dul hoganaya Shirkadda TELESOM - W/Q. Cabdirashiid Cabdiwahaab
Ceebaha dul hoganaya Shirkadda TELESOM - W/Q. Cabdirashiid Cabdiwahaab
Shirkadda isgaadhsiinta telefoonnada Somaliland ee Telesom oo ah shirkadda ugu wayn xagga isgaadhsiinta Somaliland ayaad mooddaa
inay baryahan libinlaabtay dhiig miirashada shacabkooda tabaalaysan ee la daalaa dhacaya duruufaha dhaqaale,taasoo ay u marto faa,iidada badan ee ay sida bahalnimada ah uga urusato sifo dahsoon oo aanay shacabka ama macaamiisheedu ka war qabin. Barnaamijkan cusub oo ay dhawaan soo kordhisay oo laga galo labarka 118KA islamarkaana kuu furaya codad kala duwan oo iskugu jira suugaan,ducooyin,quraan iyo nashiidooyin aad ku raaxaysanayso,oo uu dhagaysanayo qofka ku soo garaacayaa ama marka aad qof lambarkiisa garacaado aad dhagaysanayso, waxaanay ugu talo galeen oo kaliya macaamiisha isticmaasha telefoonada gacanta.
Hadaba dadwaynaw ma ogtihiin in markasta oo qof ku soo garaaco inta uu telefoonkaagu codadkaa ku soo dhacayo lagu xisaabinayo oo adiga si dahsoon lacag lagaaga jarayo,ma ogtahayse markasta oo aad buuqato inta aad ku jirto ee aad dhagaysanayso codadkan kala duwan adiga ay kaa go antahay. Hadaba sidee ayaa lacagta lagaaga jarayaa? Waxaa lagaaga jarayaa si qarsoodi ah iyadoo la bililiqaysanayo prepaidka aad ku shubato xataa hadii aanay lacagi kuugu jirin waa kugu amaah oo markaad ku shubato ayaa lagaa jarayaa oo mararka qaar ay dhacdo in haddii aad hal dollar aad ku shubato markaliya lagaa wada jarayo 0.90 cent.
Aniga laftayda ayaa mooganaa barnaamujkan oo si indhala,aan ah u aaminay shirkada Telesom oo ay igu dhacday in markaliya la iga wada jaro hal dolar oo ay yaab iyo ama kaag igu riday meesha ay martay lacagtani anigoo kaga shubtay qaybta zaadka ee E-voucherka,markii aan ogaaday inaan aflibaax ku jiray baryahanba inta uu ii furnaa 118KU ayaan iska xidhay,asaxaab badan oo aan la kulmayna waxay ii sheegeen in markii ay ogaadeen iyaguna iska xidheen,dadbadan oo aan ogayna ay jiraan siiba dadka danyarta ah ee la rafaadsan nolol maalmeedkooda islamarkaana macmiil u ah shirkada Telesom ee ku shubta qadaadiicda aadka u yar.
Waxaan ogaaday in shirkada Telesom oo qiraynaysa in ay bishii ka goosato 0.75% dadka barnaamujkan isticmaala ay tahay waxba kama jiraan ee ay si qarsoodi ah u nuugta prepaidka macaamiisheedu ku shubtaa carka ku hadalka oo aanay marnaba u tudhin. Arintan ayaa qaawinaysa aaminaadii iyo tixgalintii ay macaamiisheedu u hayeen islamarkaana horseedaysa in si taxadirleh la iskaga ilaaliyo habka ay #ShirkaddaTelesom ula xisaabtanto macaamiisheeda taasoo intii hore dadka badankoodu aanay isku mashquulin jirin xisaabta inta ay ku hadlaan iyo siday u socoto laakiin imika ay keenayso in qofkastaa la socdo oo ay dhici karto in sifooyin kale oo loogu soo dhacaa ay jiri karto. Haddii ay sii wado Tabahan cusub ee ay shirkada Telesom faa,iidada kaga raadinayso macaamiisheeda waxay ku dhalin kartaa necayb ay ka wajahdo shacabka Somaliland ee danyarta u badan lana kacaa kufaya nolol maalmeedkooda oo ay awalba u dheerayday kaadhadhka prepaidka ah ee ku hadalka oo runtii aad loo saluugsanaa lana filayay inay ka jabiso waabase fadhi ku macaash dahsoon. Masuuliyiinta telesom ee inta badan ku labista labistka islaamku caanka ku yahay ee sujuudu madoobaysay ma sidan ayaa ka sal ah oo waxay garteen inay shacabkan jeebku madhan yahay dhiil qarsoon ka buux sadaan? Miyaanay ogayn in illaa kaaryoonle iyo baalashlaha oo waxa soo galaa aad u yaryahay la qaybsato waxa soo gala,oo hadii shankun soo galo laba kun akawn kooda ku dhaco.
Waxaa hubaal ah in dadka badan koodu ay moogyihiin arintan sidaan ahaa oo kale laakiin ay yaab iyo ama kaag ku noqonayso ogaanshaheedu waayo qofkastaa wuxuu aaminsanyahay in shirkada #Telesom horeba ay u dhiig miiran jirtay hadiise ay ku dartay tana ay noqonayso CEEB CALEEG.
Abdirashiid Cabdiwahab Ibrahim [Biqil]
Aragti © Weedhsan Corporation